लकडाउनमा अधोरीबाबा खोला यस्तो हर्कत देखाउदै गरेको भेटिए ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)…. – Jagaran Nepal
लकडाउनमा अधोरीबाबा खोला यस्तो हर्कत देखाउदै गरेको भेटिए ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)….
गीत गाउदै नाच्दै खोलामा घुमिरहेको अबस्था भेटिए अधोरी बाबा । बाबालाई लकडाउनमा मात्र एक हजार भन्दा बढी फोन कल छाडा फिल्न गर्न भनेर आएको बताएका छन् । उनले यति मात्र होइन हनीमुन मनाउन नपुगेको र अब चाडै गोवा जाने तयारिएको बताए । हेर्नुहोस् भिडियोमा सम्पुर्ण कुराहरुःभिडियो
यो पनि हेर्नुहोस्ः काठमाण्डौंको कोटेश्वरमा आज घटेको अनौठो घट्ना.. प्रहरीलाई समेत बनायो हैरानी ! सरकारले चैत ११ चैतदेखि जारी गरेको लकडाउनलाई विहिवार देखि काठमाडौंमा केही खुकुलो बनाएको छ । सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न नपाएपनि नीजि सवारी साधन चलाउन पाउने र पैदल एक्लै हिड्नेलाई अवरोध नगर्ने निर्णय गर्यो । असार १ देखि सरकारी कार्यालय २ सिफ्टमा खुल्ने र ब्यवसायीहरुले पनि पसल सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गर्यो ।
नीजि सवारी साधन चलाउँदा पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन र जोर विजोर प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दियो । तर मोटरसाइकल र स्कुटर लगायत दुई पांग्रे सवारी साधनका लागि भने जोर विजोर लागू हुँदैन । तर मोटरसाइकलमा एक जना अर्थात चालक मात्र बस्न पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारको निर्णय संगै सामाजिक सञ्जालमा केहीले विरोध जनाए । अधिकांशको घरमा एउटा मोटरसाइकल हुन्छ ।
सोही मोटरसाइकल प्रयोग गरेर श्रीमान श्रीमती अफिस जान्छन् । तर सरकारले मोटरसाइकलमा चालक मात्र बस्न पाउने नियम लगाएपछि त्यसको विरोध भएको हो । सडकमा एउटै मोटरसाइकलमा दुई जना चढेको देखिएपछि ट्राफिक प्रहरीलाई हैरान भयो । अधिकांश मोटरसाइकलमा श्रीमान श्रीमती चढेको देखेपछि ट्राफिकले त्यसरी २ जना चढ्न नपाइने भन्दै रोक्यो । कसैले विरामीलाई पछाडी राखेर पनि अस्पताल लैजादै गरेको देखेपछि ट्राफिकलाई धर्म शंकट परेको छ ।
सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेसँगै निजी सवारी साधनका लागि लागु गरिएको जोर विजोर मोटरसाइकलका हकमा लागु नहुने निर्णय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नियमित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा बिहीबार जानकारी गराएका थिए । सार्वजनिक यातायात माथिको प्रतिबन्ध कायमै रहेको जानकारी दिँदै उनले मोटरसाइकल बाहेकका निजी सवारी साधनमा भने जोर बिजोर लागु हुने र लामो दूरी चल्न नपाउने बताएका थिए।